Naafada Ciidamadii Xooga Dalaka Oo Kacabnaaya Saraakiil Katirsan Ciidamada Dawlada Soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Dadka naafada ah ee degen isbitaalka Martini ayaa sheegay in taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha Ciidamada Milatariga Soomaaliya Generaal Daahir Aadan Cilmi Indha-qarshe uu amray in si deg deg ah ugaga guuraan isbitaalka ay degen yihiin.
Afhayeenka qoysaska degen isbitaal Martini Cabdi Mahad ayaa sheegay in saraakiil ka socota ciidamada xoogga dalka ay ku amreen in muddo 15 maalmood ah ugaga guuraan isbitaalka.
Ciidamadii ku naafoobay dagaaladii 1977kii ayaa waxa ay ka codsadeen dowlada in haddii laga saarayo xerada ay mudada dheer degenaayeen ayna badbaadiyeen dhismaha isbitaalka la siiyo dhul ay ku noolaadaan.
Dowlada Federalka ayaa haatan bilowday in ay xarumihii hore u lahaayeen dowlada si tartiib tartiib ah loogaga saaro dadka degen, dhowaan ayaa wasiirka warfaafinta dowlada federalka uu booqday carwadii hore oo ay degenaayeen fanaaniinta Soomaaliyeed waxana uu ku amray qoysaska aan ahayn fanaaniin ee degen xaruntaas inay isaga guuraan.
Cumar C/rashiid Cali Ra’iisul Wasaaraha SoOmaAliya Oo Gaaray Magaalada Kismaayo(Daawo Sawirada)